Josoe 12 - Ny Baiboly
Josoe toko 12
Ny mpanjaka resy.
1Ireto no mpanjakan'ny tany resin'ny zanak'Israely, ary nalainy ny taniny any an-dafin'i Jordany any atsinanana, hatramin'ny ranon-driakan'i Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona, sy ny Arabaha manontolo any atsinanan'ny ony: 2Sehona mpanjakan'ny Amoreana, izay nonina tao Hesebona; ny takatry ny fahefany dia hatrany Aroera, eo amin'ny ranon-driak'i Arnona, ary hatreo am-pamatonan'ny lohasaha amin'ny antsasak'i Galaada, ka hatramin'ny ranon-driaka Jaboaka, faritry ny tanin'ny taranak'i Amona, 3amin'ny Arabaha, hatrany amin'ny ranomasina Kenereta any atsinanana, sy amin'ny ranomasin'ny Arabaha dia ny ranomasin-tSira any atsinanana, amin'ny làlana mankany Betisimota; ary amin'ny ilany atsimo dia hatrany am-pototry ny kisolasolan'i Fasgà. 4Ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basàna, isan'ny sisan'ny Refaima nonina tao Astarota sy Edraia: 5ny takatry ny fahefany dia ny tendrombohitra Hermona, Salekà, Basàna rehetra, hatramin'ny faritry ny tanin'ny Gesorima sy ny Makatiana ary ny antsasak'i Galaada, faritanin'i Sehona mpanjakan'i Hesebona. 6Moizy mpanompon'ny Tompo sy ny zanak'Israely no nandresy an'ireo; ary ny Robenita sy ny Gadita, mbamin'ny antsasaky ny fokon'i Manase no nomen'i Moizy mpanompon'ny Tompo ny tanin'izy ireo mba ho fananany.
7Ireto kosa ny mpanjaka resin'i Josoe sy ny zanak'Israely aty an-dafin'i Jordany, aty andrefana, hatramin'i Baala-Gada, amin'ny lohasahan'i Libàna, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady misondrotra mankany Seira. Nomen'i Josoe ny fokon'Israely, araka ny fianakaviany avy, izany tany izany, ho fananany, 8dia ny any amin'ny tendrombohitra, ny any amin'ny tany iva, ny any amin'ny havoana, ny any an'efitra ary ny any amin'ny Negeba, izay tanin'ny Heteana, ny Amoreana, ny Kananeana, ny Ferezeana, ny Heveana, ary ny Jaboseana.
9Ny mpanjakan'i Jerikao, iray; ny mpanjakan'i Haia akaikin'i Betela, iray; 10ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray; 11ny mpanjakan'i Jerimota, iray; ny mpanjakan'i Lakisa, iray; 12ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray; 13ny mpanjakan'i Dabira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray; 14ny mpanjakan'i Hermà, iray; ny mpanjakan'i Hereda, iray; 15ny mpanjakan'i Lebnà, iray; ny mpanjakan'i Odolama, iray; 16ny mpanjakan'i Makedà, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray; 17ny mpanjakan'i Tafnà, iray; ny mpanjakan'i Ofera, iray; 18ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray; 19ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Asora, iray; 20ny mpanjakan'i Semerona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray; 21ny mpanjakan'i Tanàka, iray; ny mpanjakan'i Magedao, iray; 22ny mpanjakan'i Kadesa, iray; ny mpanjakan'i Jakanàna any Karmela, iray; 23ny mpanjakan'i Dora, eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'i Gojima, iray; 24tontaliny, mpanjaka iraika amby telopolo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.4074 seconds